सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगबारे छानबिन - HimalayaMail.com
Home » नेपाल » सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगबारे छानबिन
- Updated 12/08/20192:30 am
काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारीका घरमा सुरक्षाकर्मी राखेको विषयमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन सुरु गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक निर्देशिका बनाएर धमाधम पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीलाई सुरक्षाकर्मी दिनु कानुनविपरीत रहेको ठम्याइ गृहको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले पूर्व उच्चपदस्थको निजी काममा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत भएको बताए। उनले भने, ‘पीसीसीको निर्णयले बनाएको निर्देशिका कुन कानुनले बनाएको हो ? त्यो कानुन होइन। जोजोसँग छन्, तत्काल फिर्ता गरेर नियमित काममा लगाइन्छ। ’ उनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको निर्णयको कानुनी आधार खोज्ने बताए। ‘ मलाई मन पर्‍यो भन्दैमा दुई/चार जना बसेर निर्णय गर्ने ? कानुनी आधार चाहिँदैन ? ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘गृहले पहिला पनि भनेको हो फेरि एक पटक प्रहरी मुख्यालयलाई सचेत गराउँछौं। ’
Previous Post संसदीय समितिमा बहुपतिको बहस
Next Post जेष्ठ नागरीक आमा भुमीसरा थापालाई “मदर अफ पाल्पा” सम्मान गर्दै पाल्पाली बार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न